“နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲနောင်ရိုးစိတ်ဓါတ်” | ဒီရေ
န.အ.ဖကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပြီး မြန်မာ ပြည်သူများနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိူင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အဆုံးအစွန်ထိ စိန်ခေါ် လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အာလုံးက ၀ိုင်းဝန်း တောင်းဆို နေကြ၊ တားမြစ် နေကြသည့် ကြားကပင် ယခုလို ကိုယ်သဘော ကိုယ်ဆောင်၍ ပြုမူလိုက်ခြင်းသည် ဤတစ်ကြိမ် သည်လည်း ပထမဆုံး အကြိမ် မဟုတ်တော့ပါ။ န.အ.ဖ စစ်အုပ်စုက သူလမ်းစဉ်ကို မဆုပ်မနစ် အကောင်အထည် ဖော်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ၄င်းတို့ ဘက်က ကြည့်လျင်တော့ ၎င်းတို့ လိုချင်သည့် ပန်းတိုင်ရောက်လုပြီ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ ဘက်ကရော ပန်းတိုင် ရောက်လုပါပြီလား…..? တာဝန်ကျေပြီလား…..?
န.အ.ဖ၏ လမ်းပြ မြေပုံ ခုနုစ်ချက်၏ အဆင့်တိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ (ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ)က ပါးစပ်ဖြင့် တိုက်ဖျက် လာကြသည်မှာလဲ ယခု အချိန်တွင် ဆုံးခန်းတိုင်လုပြီ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်လည်း အလုပ်မပါ ပါးစပ်ချည်း သက်သက်သာ တိုက်ဖျက် နေကြပါက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်နှင့် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးလောက် ညံ့သောသူ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနိုင်တော့မည် မထင်ပေ။ ပါးစပ်နဲ့ မတိုက်ဖျက်ချင် လို့ရော တွေများရှိလိုလဲဟု မေးစရာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့်သည် စည်းလုံးချင်း အင်အားလောက် ကောင်းသော လက်နက် မရှိမှန်း သိလျက်နှင့်ပင် ထိုလက်နက်ကို ဆွဲကို ရန်တွန့် ဆုတ်နေခဲ့ကြသည်။ မယုံမရဲ ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ဘုရင်နောင်၏ နောင်ရိုး တိုက်ပွဲ၊ နောင်ရိုး စိတ်ဓါတ်ကို မေ့လျော့ နေခဲ့ကြသည်။ လမ်း(way) မရှိလိုပါပဲ လူထုကို ဦးဆောင်ချင် နေကြသည်။
တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်သည်မှာ လက်တွေ့ ကျသော အမြင်များ၊ လမ်းစဉ်များကို ပြည်သူ လူထုအား ချပြပြီး ဦးဆောင် သင့်သည်။ အမျုိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်၇န် ဆုံးဖြတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပဲ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးအား ဒုက္ခ ပင်လယ်တွင်းမှ ကယ်တင်ရန် အတွက် ပထမ ခြေလှမ်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ စည်းရုံးရမည်။ မြန်မာ လူဘောင် အတွင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး၏ ဆက်စပ်မှုကို ရှင်းလင်းစွာ သိနားလည် ကြခြင်း မရှိသေးပေ။ ၄င်းအခြင်းအရာကို ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မည်သည့် အင်အားစုကမှ မဟုတ်သော သာမာန် ပြည်သူ တယောက်နှင့် စကားအနည်းငယ် ပြောကြည့်ရုံဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။
နှစ်ကာလ အတန်ကြာ အဖက်ဖက်က ပြင်ဆင်ပြီးသော စနစ်တကျ ဖွဲ့ စည်းထားသော န.အ.ဖ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ရပ်တန့် သွားရန် လုပ်ဆောင်မည် ဆိုလျှင် ပြည်သူ အတွက် အတွေ့အကြုံ ရှိသော အရည်အချင်းရှိသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးတော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်သည် အထက်ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည်စုံသည့် အပြင် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ့်သုံးနှစ်တာ ကာလကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် လူထု ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆယ်သုံးနှစ် ကာလကို အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် ဖြတ်သန်း ခဲ့ရခြင်းသည် သူ့ အတွက် မဟုတ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ အတွက် မဟုတ် မြန်မာ ပြည်သူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို သိသာ ထင်ရှား သွားစေသည့် အချက်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ပြည်သူလူထုကို တရားဝင် ဆက်လက် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ခွင့် ပေးထားပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို သက်စိုးရှည်စေမည် 2008 ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရေး လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည် ပါတီ ဆက်လက် ရှင်သန် ရပ်တည်ရေးထက် စာလျှင် ပြည်သူဘ၀ လွတ်လပ်ရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်းများနှင့် NLD ပါတီက အလေးထားကြောင်း သိသာ ထင်ရှားစေသည် သာဓကပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများ အနေဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်သူ့ အပေါ်ထားသော စေတနာကို နားလည်သော အားဖြင့် NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၀န်းရံ ထောက်ခံ ကြရန်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ မြန်မာ ပြည်သူ လူထု အများစု လိုလားသော ပြည်သူ့ ဘ၀များ အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်သို့ ရောက်ရှိပေမည်။
မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန် ခဲ့သော န.အ.ဖ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများနှင့် ပက်သက်ပြီ်း ကျောင်းသား အများအပြားနှင့် ကျွန်တော် ဆွေးနွေး ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် တက္ကသိုလ် ပညာသင်ကြား နေရသော ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ကျောင်းသား အများစုမှာ စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုများ၊ မကောင်းသည့် ဘက်ကိုသာ အလွယ်တကူ ရောက်ရှိ သွားစေနိုင်သော ခေတ်စနစ် အခြေအနေ တို့ကြောင့် ကိုယ်နိုင်ငံ၏ အရေးကိစ္စများကို စိတ်ဝင်စားဖို့ နေနေသာသာ နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ အန္တရာယ် အရှိဆုံး အလုပ်ဟု သတ်မှတ် နားလည် ထားကြသည် ခေတ်ကြီးတွင် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပြောဆို လုပ်ဆောင် နေကြသော ၄င်းကျောင်းသားများသည် တိုးတက်သော အမြင်ရှိသည့် ကျောင်းသားများဟု ယူဆလျှင် ရနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များကို ၎င်းကျောင်းသားများနှင့် ကျွန်တော် ပြောဆို ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သည့် အခါ ၄င်းတို့ အယူအဆ အမျိုးမျိုးကို သိခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံ အလှည့်အပြောင်း များတွင် ရဟန်း သံဃာများနှင့် ကျောင်းသား လူငယ် တို့သည် မည်သည့် အခါမှ ဦးလေးခြင်း မရှိဘဲ ရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်မြဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အကြောက်တရား များကြောင့် ပြည်သူ လူထု ထိုက်သင့် သလောက် ပါဝင်ခြင်း မရှိသည့် အခါများတွင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်စဉ်အချို့မှာ လိုအပ်သည့် ပန်းတိုင် မရောက်ခင် ကျရှူံး ရပ်တန့် ခဲ့ကြရကြောင်း၊
ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲတွင် ယင်းအချက်ကို မိမိတို့ ကြိုတင် နည်းလမ်းရှာ ကြိုးစား သင့်ကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်မှာ လူထု အုံကြွမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခါ အစိုးရက အကြမ်းဖက် တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ် မလာစေရန် အစိုးရ၏ လက်ကိုင်တုတ် သဖွယ် အသုံးချ ခံနေကြရ ရှာသော တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူ့ ရဲများအား မီဒီယာများမှ ဖြစ်စေ အခြား နည်းလမ်းနှင့် ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏ မိဘ သဖွယ် ဖြစ်သော ပြည်သူများအား အကြမ်း မဖက်ရန်နှင့် လူထုနှင့် ပူးပေါင်းရန် ကြိုတင် မေတ္တာရပ်ခံ ထားသင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာများ အနေဖြင့်လည်း ပြည်တွင်းတွင် လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်နေစဉ် ကာလနှင့် အချိန်ကိုက် နိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာသံရုံးများနှင့် တရုတ် သံရုံးများတွင် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် မြန်မာ ပြည်သူများနှင့် တသွေးတည်း တစ်သားထဲ ရှိကြောင်း ပြသ သင့်ကြကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များသည်လည်း န.အ.ဖ၏ နယ်ခြားစောင့် တပ်ပြောင်းလဲရေးကို လက်မခံပဲ ဆက်လက် တောင့်ခံထားကြ စေလိုကြောင်း၊ အခြား တစ်ဖက်မှလဲ နိုင်ငံတကာ ဖိအားများ ယခုထက် ပို၍ ပြင်းထန် လာစေရန် ယခု အချိန်မှ စ၍ လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောဆို ဆွေးနွေး ကြပါသည်။
ချုပ်၍ ဆိုရသော် ယခု တစ်ကြိမ် နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် မြန်မာ ပြည်သူတို့က ဘုရင့်နောင်၏ နောင်ရိုး တိုက်ပွဲ၊ နောင်ရိုး စိတ်ဓါတ်ထုံး နှလုံးမူ၍ နောက်လှည့် မကြည့်စတမ်း ရည်မှန်းချက် ရောက်သည်အထိ တိုက်ကြရန်နှင့် အဖက်ဖက်က အစိုးရအား ဖိအားပေးသော မည်သည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို မဆို ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြမည် ဆိုပါက သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသား လူငယ်တို့ ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး တိုက်ပွဲကြီးကို မကြာမီ အချိန်ကာလ အတွင်း မြန်မာ ပြည်သူတို့ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ ကြရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဤဆောင်းပါးဖြင့် ကြိုတင် အသိပေး အပ်ပါသည်။